Mpanao mariazy → maritrano Miorina • Archité anatiny • Ohatrinona ny vola azon'ny mpanao maritrano?
Architect miasa amin'ny drafitra sy famolavolana tranobe na rafitry. Ny mpikaroka dia afaka manadihady ireo hevitra na hevitra momba ny mpanjifany ary manangana tetikasa fananganana miavaka mifototra amin'izany.
Ny asan'ny mpanao maritrano dia mety ho samy hafa: ny sasany dia manokana amin'ny famolavolana trano fonenana na fivarotana, ny hafa kosa mifantoka amin'ny fanajariana ny tany, ny drafitra an-tanandehibe, ny famolavolana anatiny ary ny marika. Ihany koa ny sampana maritrano mandrafitra ny trano manara-penitra.
Etsy ambany dia jerentsika akaiky ireo asa roa - mpamorona anatiny ary Archité mivelatra. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny mampiavaka azy manokana ary mitaky fahaizana sy fahalalana samihafa.
Ny mpikaroka momba ny tontolo iainana dia afaka manatsara ny toerana ety ivelany, fa mandany ny ankamaroan'ny fotoanany ao amin'ny birao, mamorona sy manova drafitra, manomana vinavina amin'ny vidim-bidy ary fihaonana amin'ny mpanjifa. Na izany aza dia tsy midika akory izany fa ny arkitekan'ny tany dia tsy mandany fotoana ao amin'ny toeram-piasan'izy ireo na any amin'ilay toerana andrana arak'asa.
Ny ankamaroan'ireo mpanao maritrano dia miasa ao amin'ny indostria maritrano sy injeniera. Ny sasany amin'izy ireo dia miasa amin'ny orinasa serivisy miatrika ny maritrano.
Fahaiza-manao sy fahaiza-manao amin'ny mpahay maritrano
Mba hahombiazana, ny mpanao maritrano dia tokony hanana ireto fahaizana malefaka sy toetra tsara ireto:
famoronana - hamela anao hamolavola toerana ivelany tsara tarehy izay hiasa ihany koa
fihainoana mavitrika - izany dia hahafahanao mahatakatra ny filan'ny mpanjifa sy ny filany
fifandraisana am-bava - tsy maintsy mahavita mampita vaovao amin'ny mpanjifany ny maritrano
fisainana mitsikera - mila mandray fanapahan-kevitra sy mamaha olana ireo mpanao mari-trano, ary ny fahaiza-misaina tsara mitsikera dia hamantatra ny vahaolana mety ary avy eo manombana azy ireo alohan'ny hisafidianana izay tsara indrindra
fahaizana mamaky teny amin'ny solosaina - mitana andraikitra lehibe amin'ity asa ity ny teknolojia, ao anatin'izany ny rindrambaiko toy ny CADD amin'ny fanomanana modely sy ny Geographic Information Systems
Adidy sy adidin'ny mpanao mari-trano tontolo
Ity asa ity dia matetika mifandraika amin'ny mpanjifa, injeniera ary mpikaroka ary mikolokolo ireo fifandraisana ireo hamaritana vahaolana mety hitranga amin'ny olana sy hamantatra ireo filàna.
Zava-dehibe ihany koa ny fiheverana ny anton-javatra manodidina ny tontolo iainana toy ny rano mivoaka sy ny angovo azo rehefa miasa. Tsy misy zaridaina azo noforonina raha tsy misy ny fiomanana amin'ny planina tranonkala sy ny sary momba ny drafitra amin'ny alàlan'ny famolavolana sy fanampiana rindrambaiko mpamokatra (CADD). Ny arsitekin'ny tontolo dia manomana ny vinavina amin'ny vidiny ary manara-maso ny teti-bolan'ny tetikasa. Tsy voatery ho birao miasa izany.
Famolavolana tranobe fonenana
Ny mpamorona ao anaty trano dia miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifa hamantatra ny filan'izy ireo sy ny filany ho an'ny efitrano manokana na ny trano iray manontolo. Amin'ny tranga sasany dia manome fahaizana manokana momba ny famolavolana tetikasa vaovao izy ireo. Izy ireo koa dia manampy amin'ny famoronana toeram-ponenana iray ao anatiny na ivelan'ny trano. Ny ankamaroan'ny baiko dia mahatafiditra fihaonana amin'ny mpanjifa imbetsaka, mamorona endrika ary manome safidy amin'ny fanaka, santionany amin'ny loko, gorodona ary fisafidianana jiro.
Toy ny fananganana trano, ny famoronana ara-barotra dia mitaky ny dingana mitovy nefa amin'ny ambaratonga lehibe kokoa. Ny mpamolavola anatiny dia manombana ny fiasa, ny faharetana, ny sarin'ny marika mpanjifa ary ny lafiny tontolo iainana. Ireo tetik'asa dia tsy maintsy mahafeno ny teti-bolan'ny mpanjifa sy ny fepetra takiana. Amin'ny toe-javatra sasany, ny mpamorona mpivarotra dia mila manamboatra famolavolana mamela ny asa hitohy mandritra ny fametrahana.
Ny portfolio iray dia rakitra tsotra fotsiny izay mitantara tantara matihanina amin'ny alàlan'ny sary, soratra, firafitra ary endrika. Misy karazana karazany maro amin'izy ireo satria misy olona manao an'io asa io. Ny portfolio iray dia mety ho dizitaly feno, analog tanteraka, na fitambaran'ireo roa ireo. Ny departemanta Human Resources ao amin'ny orinasanao dia mety mitaky fandefasana nomerika fotsiny, alefa amin'ny alàlan'ny vavahadin-tranonkala.
Ny portfolio iray dia misy tetikasa tsara indrindra. Raha misy betsaka amin'izy ireo amin'ny kaonty mpamorona na ny kaontin'ny maritrano, ny tsara kokoa. Manana anjara toerana lehibe amin'ity asa ity ny traikefa.
Zava-dehibe ny fiaraha-miasa
Ny mpikaroka aretin-trano, tranobe ary zavatra hafa. Ireo endrika ireo dia ampiasaina amin'ny tranobe vaovao, fanavaozana, fanamboarana ary fanitarana ireo trano efa misy. Izy ireo koa dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fizotran'ny fanavaozana, fanavaozana sy fanamboarana trano simba na simba, ao anatin'izany ny trano arovana, trano fonenana ary tsangambato. Ny mpanao maritrano dia mandray anjara amin'ny fizotran'ny fananganana manontolo, manomboka amin'ny famolavolana voalohany, ny sary ary ny volavolan-tolo-kevitra ho fanovana miorina amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa. Ny mpanao maritrano dia niara-niasa tamina matihanina matihanina nanangana ny tetik'asa nanatontosa ny tetik'asa tsara indrindra, hatramin'ny famakafakana sy fankatoavana farany.
Ohatrinona ny vola azon'ny mpanao maritrano?
Ny karama dia miankina amin'ny toerana misy ny asa sy ny haavon'ny traikefa. Ny mpikaroka vaovao mahay dia afaka manatanteraka asa lalina, toy ny fanaovana sary, fitsidihana ireo toerana misy anao, ary ny tatitra momba ny maritrano izay tompon'andraikitra amin'ilay tetikasa.
Amin'ny maha-maritrano miasa anao dia afaka miantehitra amin'ny fahalalahana voafetra ianao amin'ny resaka ora fiasana sy fifidianana tetikasa. Ny haben'ny asa amin'ny birao sy ny famolavolana tena izy dia mitombo amin'ny fitomboan'ny traikefa sy ny fahatokiana.
Rehefa mihalehibe ny traikefa dia miova ny andraikitra - toy izany koa ny karama. Noho izany, sarotra ny milaza tsy mitombina hoe ohatrinona ny vola azon'ny mpahay maritrano.
Hitanisa ity pejy ity Fandrafetana ny tanàna - inona marina no tena izy?
5 / 5 ( 26 vato )
mpanao mari-tranompanao maritranoarsitikan'i Częstochowaarchitecture katowiceMpanao maritranompanao maritrano ao Krakowmpanao marika samboarsitek Lublintsena vaovao tsenaarkitekera poznańarsitekera Szczecinwaraw Architecturempamorona anatinyAtitany an'ny Krakowsambo mpanao maritranompamorona anatiny poznańmpamorona anatiny ao Szczecinady amin'ny mpamorona anatinywroclaw an'ny tranombarotra anatinympanao marika WrocławArchitectural ny karamaohatrinona ny vola azon'ny mpamorona anatinympanao marika ilainaportfolio portfolioasan'ny maritranoasa maritranoinjeniera teknisianaAsa matihanina